नेपालको परराष्ट्रनीति परम्परागत ढङ्गले अघि बढेको भन्दै जानकारहरू टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विदेश नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ ढङ्गले नेपालको सम्बन्ध छिमेकीसँग विस्तार गर्ने र अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको छ । विशेषगरी दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबारे नेपालमा विशेष चासो हुने गर्छ । उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने तयारी सरकारले के कसरी गरिरहेको छ ? निकट भविष्यमै हुन गइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबारे केन्द्रित भएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानी :
 नेपालको परराष्ट्र (विदेश) नीति परम्परागत छ, यसलाई अद्यावधिक गर्ने तयारी कस्तो छ ?
नेपालको परराष्ट्र नीति अद्यावधिक गर्ने काम समय समयमा भइरहेकै छ । प्रायः हरेक परिवर्तनपछि केही न केही नयाँ विषय यसमा समावेश हुँदै गरेका छन् । त्यसबाहेक जति–जति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विभिन्न देशका भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने नयाँ–नयाँ विषय उठ्दै जान्छन्, त्यसले हाम्रो विदेश नीतिलाई केही न केही प्रभाव पर्छ नै । अहिले हामी दुईवटा कुरालाई आधार बनाएर विदेश नीतिमा परिमार्जन र विकास गर्न लागेका छौँ । पहिलो, पछिल्लो केही दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा निकै ठूला परिवर्तन भएका छन् । हाम्रो विदेश नीतिले त्यो परिवर्तन आत्मसात् गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, खुला व्यापार कि संरक्षणवादी नीति लिने जस्ता मुद्दा, देश–देशका सम्बन्ध, त्यसलाई प्रभावित पार्ने जुन विषय आएका छन्, त्यसलाई पनि हामीले समावेश गर्नु छ । अर्कोतिर नेपाल आफैँ ठूलो राजनीति परिवर्तनबाट गुज्रेको छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी ग¥यो । संविधान कार्यान्वयन भएर देश राजनीतिक स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यो नेपालको बदलिँदो सन्दर्भ, नेपालको नयाँ केन्द्रीय लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर यसलाई सफल पार्न अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गर्ने हिसाबले हाम्रो विदेश नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नेछौँ र यसलाई थप परिस्कृत गरेर अघि बढ्छौँ ।
 उत्तरतिर सम्बन्ध बनाए दक्षिण बिच्किने, दक्षिणतिर सम्बन्ध बनाए उत्तर बिच्किने, यस्तो किन हुन्छ ?
हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हितको पहिचान नै हो । हामीले मूलतः हाम्रो हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने हो । छिमेकीसँगको सम्बन्ध असाध्य महŒवपूर्ण छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकसँग जुन किसिमको सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ, त्यसबाट हामी अत्यन्त उत्साही पनि छौँ । हामीले हाम्रो छिमेकीलाई भनिरहेका छौँ, नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हुनुको नाताले यसले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो विदेश नीतिलाई तर्जुमा गर्छ । हामीले तदनुरूप नै हाम्रो सम्बन्ध अघि बढाउँछौँ । हाम्रो विदेश नीतिबाट कोही पनि विचलित हुनुपर्ने, सशङ्कित हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । नेपालले जहिले पनि मित्रताको हात अघि बढाएको छ । हाम्रो घोषित नीति नै सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने हो । हामी हाम्रा छिमेकीका जायज चासोप्रति संवेदनशील छौँ तर हामीले स्वतन्त्रपूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा कोही सशंकित हुनुपर्दैन । हामी कसैको हितविरुद्ध जाँदैनौँ । नेपाली भूमि कसैको हितविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ । विगतमा केही आशङ्का थिए भने पनि अब हट्दै गएका छन् । छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्दैछौँ ।
 निकट भविष्यमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ, यो भ्रमणको खास सन्देश के हो ?
– सरकारले औपचारिक मिति घोषणा त गरेको छैन, तथापि निकट भविष्यमै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि हुन लागेको भ्रमण हो यो । यसको दुईटा पक्ष छन् । एकातिर धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष जोडिएका छन् । उहाँले (नरेन्द्र मोदी) जनकपुर र मुक्तिनाथको धार्मिकस्थल जाने योजना बनाउनुभएको छ । दोस्रो, नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणताका भएका समझदारीलाई अझ मूर्तरूप दिने र ठोस योजना बनाउने काम हुनेछ । २१ औँ शताब्दीको आवश्यकता सुहाउँदो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा उठाउने यो भ्रमणको उद्देश्य हुनेछ । यो भ्रमणलाई फलदायी बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।
 केही दिनअघि चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल वा नेपालका प्रभानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुने वातावरण बनाउने काम भएको हो ?
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । हामी दुवै छिमेकीको तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानको तयारीमा छौँ । मलाई विश्वास छ, सन् २०१८ लाई उच्चस्तरीय भ्रमणको वर्षको रूपमा अगाडि लग्न सक्नेछौँ । दुवै देशका निकाय निकट सम्बन्धमा रहेर छलफलमा छौँ । दुवै देशका नेतृत्वको सुविधाअनुसार अनुकूल हुने गरी भ्रमणको टुङ्गो लगाउँछौँ । सन् २०१८ भित्रै भ्रमणको आदानप्रदान हुन्छ । प्रस्ताव अघि बढिसकेको छ । निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुहुन्छ र त्यसको केही समयपछि चीनको तर्फबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
नेपालका लागि भारतीय आकाशमा हवाई रुटको अनुमतिबारे सम्बन्धमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ ?
हामीले विगतदेखि नै नेपाललाई थप हवाई प्रवेश बिन्दु दिलाउनका निम्ति भारतीय सरकारसँग कुराकानी गरेका छौँ । हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणताका पनि चारवटा थप ‘इन्ट्री’ को कुरा गरेका छौँ । मलाई विश्वास छ, यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणताका केही नयाँ घोषणा हुनेछन् ।
 नेपाल–भारत खुला सीमा, त्यसले निम्त्याएका समस्या र व्यवस्थापनबारे यसपटकको भ्रमणताका केही सहमति होला ?
हरेक पटक यो छलफलको विषय बन्ने गरेको छ । यसअघिको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणताका पनि केही छलफल भयो । यसपटक मोदीको भ्रमणताका पनि केही विषय उठ्ला । नेपाल–भारत खुला सीमा हाम्रो सम्बन्धको एउटा विशेष पक्ष पनि हो । यसका धेरै सकारात्मक पक्ष र निकै चुनौती पनि थपिएका छन् । यसको सही व्यवस्थापन दुवै देशको उच्च प्राथमिकतामा छ । हामी चाहन्छौँ खुला सीमा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने राम्रो माध्यम बनोस् तर तस्करका निम्ति, अवाञ्छित तŒवका निम्ति सजिलो माध्यम नबनोस् । गलत तŒवलाई नियन्त्रण गर्न कुन विधि हुन सक्छ, त्यसमा अहिले छलफल गरिरहेका छौँ । सीमासम्बन्धी सबै विषयको टुङ्गो लगाउन अहिले नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्भेयर जनरल निरन्तर लागेका छन् । सबै ठाउँमा सीमाको व्यवस्थापन हुँदै गएको पनि छ । कुनै ठाउँमा अझै तनावपूर्ण छ । भारतीय सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा पसेर तनाव सिर्जना हुने गरेको छ । दशगजालाई सुरक्षित राख्ने, सीमा कतैबाट पनि अतिक्रमण हुन नदिने, जनताको सहज आवागमनलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने छ । कूटनीतिक तवरबाट यस्ता समस्या समाधान गर्नेमा छौँ । हरेक समस्याको समाधान कूटनीतिक तवरबाट खोजिनुपर्छ भनेर भारतीय पक्षलाई भनेका छौँ । अर्को, अहिले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको बैठक पनि जारी छ, त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा दुई देशको खुला सीमा र त्यसको व्यवस्थापन हुनेमा आशावादी छौँ ।
 भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा केही नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना छ ?
हामीले अघिल्लो चोटीको भ्रमणमा पनि जोड दिएका थियौँ, नयाँ सम्झौता थप्दै जानुभन्दा पनि वर्षांैदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका विगतका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ । त्यसले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ । यदि कुनै योजना व्यावहारिक हिसाबले सम्भव भएनन््, असान्दर्भिक छन् भने सूचीबाट हटाउँ । जति सान्दर्भिक छन्, त्यसको कार्यान्वयन गरौँ । यसअघि तीनवटा सहयोगको क्षेत्र पहिल्याएका छौँ, नेपाल–भारत रेलमार्गको कुरा (रक्सौल–काठमाडौँ जोड्ने), जलमार्ग भएर समुद्री किनारसम्म पुग्ने कुरा र कृषि क्षेत्रमा साझेदारी । यी तीनवटै विषयमा अहिलेको भ्रमणमा ठोस सम्झौता हुन सक्छ ।
 भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो चीन भ्रमणलाई नेपालले कसरी हेरेको छ ?
उहाँहरूको बीचमा एकान्त वार्ता जस्ताको तस्तै थाहा हुने कुरा त भएन । मिडियामा आएको समाचारअनुसार दुई देशबीचमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मुद्दामा छलफल भएको देखिन्छ । चीन र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुनु स्वागतको विषय हो । उहाँहरूको सुमधुर सम्बन्धले हामीलाई पनि फाइदा पुग्छ । दुई छिमेकीबीच असल सम्बन्ध बढ्दै जानु स्वागतयोग्य विवषय हो ।
 भर्खरै उत्तरकोरिया र दक्षिण कोरीयाबीच भएको सम्झौतालाई नेपाल सरकारले कसरी लिएको छ ?
नेपाल सरकारले त्यसलाई समर्थन र स्वागत गरेको छ । हामी दुई कोरियाबीचमा बढ्दै गएको समझदारी, उहाँहरूबीच हुन गइरहेको शान्ति सम्झौता र भविष्यमा हुने शान्तिपूर्ण एकीकरणको स्वागत गर्दछौँ । कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक सशस्त्र मुक्त बनाउने उहाँहरूको सङ्कल्प सकारात्मक छ । त्यसले विश्वमा आणविक युद्धको खतरालाई टार्नलाई महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यसलाई सफल पारियोस्, नेपाल शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
 रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका नेपाली युवाका समस्या समाधानमा के योजना छन् ?
मूलतः नेपाल जबसम्म आर्थिक रूपले सबल हुँदैन, जबसम्म देशभित्रै नयाँ–नयाँ उद्योग खोलेर आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र पार्दैनौँ, तबसम्म वैदेशिक राजेगारीको समस्या कायमै रहन्छ । आर्थिक कूटनीतिका मूलतः तीनवटा पक्ष छन् । एउटा, नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी भिœयाउनुपर्छ । दोस्रो, दुवै छिमेकी देशसँग पूर्वाधारका क्षेत्रमा, यातायात सञ्जालका क्षेत्रमा साझेदारीको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसको कार्यान्वयन भएपछि रोजगारीको अवसर बढाउने छ । तेस्रो, हाम्रा दाताहरूले लगानीको अधिकांश भाग कम उत्पादक क्षेत्रमा (तालिम, प्रशिक्षण विदेश भ्रमण, नेतृत्व विकासको क्षेत्रमा) खर्च भइरहेको छ । आफ्ना साधनस्रोत सही ढङ्गले खर्च गर्नुस् भनिरहेका छौँ । स्वच्छ पानी पिउनुपर्छ यो चेतना पनि जरुरी थियो । दाताहरूको लामो समय त्यसमा गयो । त्यो चेतना अब नेपाली जनताले हासिल ग¥यो । अब घर–घरमा धारा चाहियो । त्यसबाहेक सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास त छँदैछ । अब आउने बजेटमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ योजना आउने छन् । विस्तारै रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्ने छौँ ।